Ny hotely mahafinaritra an'i Amerika mandritra ny vanim-potoana volamena amin'ny karatra paositra
Home » Lahatsoratra farany farany » Hospitality Industry » Ny hotely mahafinaritra an'i Amerika mandritra ny vanim-potoana volamena amin'ny karatra paositra
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Tamin'ny Febroary 2000, nisy fampirantiana tsy manam-paharoa tao amin'ny Metropolitan Museum of Art any New York: "Walker Evans and the Picture Postcard." Evans dia mpitaingina sary tamin'ny taonjato faha-20 izay nampiseho ireo voly vaky rava; fianakaviana sharecropper, ary toeram-pambolena sy fiompiana atsimo maina mandritra ny fotoam-pahaketrahana, orinasa goavambe any Avaratra; sy ny endrik'ireo mpandeha ambanin'ny tany any New York.
Evans dia nanangona karatra paositera nandritra ny androm-piainany nandritra ny vanim-potoana volamena hatramin'ny 1900 ka hatramin'ny 1920.
Io fisehoan-javatra io dia notarihan'ny sampan-draharahan'ny paositra amerikana tamin'ny taona 1907 izay nanapa-kevitra fa ny lafiny banga amin'ny karatra paositra dia mety ahitana ny adiresin'ny mpandray sy ny hafatra iray.
Mandritra izany fotoana izany, ny Post Office dia nametraka vidin'ny hajia 1 ¢ amin'ireo carte postales ireo.
Tombontsoa iray hafa dia ny fihenan'ny vidin'ny lithography loko offset izay nanome ny paositry ny sarin'ireo sary miloko tanana, miaraka amin'ny manga manga, maitso ary mena.
Nandritra io vanim-potoana io, ny sokajy misy karatra paositra dia misy hotely, trano fandraisam-bahiny fahavaratra, fiantsonan'ny fiaran-dalamby, fiara, sidina an-dalambe, arabe lehibe any amin'ny vohitra, renivohi-panjakana, ozinina, asa ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ireny karatra hotely ireny dia novokarin'ny orinasa roa: Curt Teich & Company, Inc., Chicago ary Tichnor Brothers Inc., Boston izay samy nikatona tamin'ny taona 1970. Tombanana fa ny Curt Teich & Company dia nanonta 400,000 fomba fijery samihafa momba an'i Etazonia, Kanada ary trano fandraisam-bahiny tany ivelany nandritra ny fito amby fitopolo taona.
Tichnor Brothers dia namokatra karatra karatra hotely 25,000 amin'ny ankapobeny avy amin'ny fanjakana rehetra. Rundown an'ny Hotely mahafinaritra any Amerika nandritra ny vanim-potoanan'ny Golden tamin'ny carte de poste dia hita tao amin'ny Barry Zaid's "Wish You Are Here Here: A Tour of the America's Great Hotels During the Golden Age of the Photo Postcard" Crown Publishers, Inc. (New York 1990).
“Fa ao anaty karatra, ny hotely rehetra dia ao anatin'ny laharam-pahamehana indrindra, Ity dia fitsangatsanganana mamakivaky an'i Amerika izay mbola azontsika raisina. Azontsika an-tsaina fa isika io no milomano manoloana ny Marlborough - Blenheim eo amin'ny morontsiraka volamena sy feno fasika any Atlantika City na mandehandeha mamaky ny zaridaina kaktosy mahafinaritra an'ny Camelback Inn any Phoenix na mankafy ny fahitana ireo tendrombohitra amin'ny alàlan'ny fikandrana avo amin'ny Prince of Wales Hotel ao amin'ny Waterton Lakes National Park any Canada. Tsy izany ve ny latabatra misy antsika ao amin'ny efitrano fisakafoana nilahatra nilahatra hazo, teo anilan'ilay renirano mikitroka izay mamakivaky ny lodge ao Brookdale, Kalifornia? Ity dia tantara hita maso, rakitsoratry ny fiainan'ny mpandeha taloha. ”
Soa ihany, hotely kilasika marobe no voatahiry ao amin'ireo karatra paositra tsy manam-paharoa ao amin'ny boky "Wish You Were Here". Ireto ny tsara indrindra amin'izy ireo: